Mapurisa Opomerwa Mhosva Yekuda Kumisa Musangano weCCC kuMasvingo Achiti Kune weZanu-PF
Mapurisa achirambidza vatsigiri veCitizens Coalition for Change kuita musangano kuMarondera
Bato reCitizen Coalition for Change,(CCC) muMasvingo riri kupomera mapurisa mhosva yekutsika tsika kuvapa mvumo yekuita musangano wayo wekutsvaga rutsigiro musi weSvondo uyo uchauya
mutungamiriri wavo VaNelson Chamisa.
Sachigaro weCCC, mudhorobha reMasvingo, VaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva akawanda vachienda nemapepa avo ekuzivisa mapurisa pakamba yeMasvingo Central nezvekuda kuita musangano asi vange vachirambirwa vachipihwa chikonzero chekuti bato reZanu PF rine musagano mudhorobha iri musi mumwechetewo. Vaenderera mberi vachiti vakanga vachida kuitira musangano munhandare yeMucheke B grounds.
VaMureri vati mapurisa ari kuti vatsvage rimwe zuva risiri Svondo 20 Kurume, nekuti nhandare yavakasarudza kuitira musangano iri pedyo nenhandare yeMamutse Stadium iri kuitirwa musangano nebato reZanu pf nekudaro vanozotadza kuchengetedza runyararo zvakakwana.
VaMureri vaenderera mberi vachiti chinovarwadza ndechekuti bato ravo ndiro rinorambidzwa apo mamwe mapato achibvumidzwa kunyange vakaenda kunozivisa mapurisa nguva yakatenderwa nemutemo weMantainance of Peace and Order Act,(MOPA). Vati vacharamba vachidzokera kunoonesana nemapurisa kusvika vatenderana
Bato iri rakarambidzwawo nemapurisa kuita musangano svondo rapfuura muRudhaka Stadium kuMarondera uye kuGokwe richinzi harina kutevedzera zvakakwana mutemo weMOPA.
Munyori wezve sarudzo muCCC, muMasvingo, VaGodfrey Madzikanda, vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwaviri kuitwa vachirambirwa kupuwa mvumo yekuita musangano wavo parizvino.
Vanoongorora nezvematongerwe enyika vakazvimirira, Dr Davison Mabweazara Mugodzwa, vati mapurisa ari kuita basa rawo vachisarudza mapato izvo zvichikanganisa kuitwa kwesarudzo zvakanaka.
Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi vakati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti bato iri rite risati raita misangano zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana.
Asi mutungamiti weCCC VaNelson Chamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi vakuru vakuru vari kuvatuma. Mutevedzeri wemutungamirti wenyika VaConstantino Chiwenga vakatiwo havaudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana.